UKUNGAPHUMI KWEHALLOWEEN EKHETHEKILEYO NGO-2019: ININI KWITV? UMLINGISI, UMHLA WOMOYA, IJELO, IMIFANEKISO - IRADIO TIMES - UKUHLEKISA
Liliphi ixesha lokungahambi kweHalloween ekhethekileyo kumabonwakude?
Ngoku kuthotho lwayo lweshumi, i-sitcom ekhawulezileyo engaphumiyo iye yathandwa ngokuqinileyo kumdlalo weqonga we-BBC. Lo nyaka uphawula umboniso wokuqala weHalloween okhethekileyo obona iinzame zikaLee zobuqhetseba okanye ezonyango zihamba ngendlela engalunganga.
Nantsi into ekufuneka uyazi…
Nini ukungahambi kweHalloween ekhethekileyo kumabonwakude?
I-Halloween ekhethekileyo iya kudlala ngo-10: 35 ngokuhlwa NgoLwesithathu nge-31 Okthobha 2019 kwi-BBC1.
Ukubhiyozela iHalloween, uLee (Lee Mack) kunye noLucy (Sally Bretton) bathatha isigqibo sokuthatha abantwana babo ngobuqhetseba, kodwa izinto ziye zisiba mbi xa uLee ephulukana nomnxeba emnyango wendlu yamaVictoria. Ukubuya kwakhe ukuyokuphinda ayifumane, ufumanisa ukuba isakhiwo sibambe iimfihlelo ngekungcono ukuba zishiywe zodwa.
Yintoni kanye kanye eyenzekayo kule ndlu indala ingaqhelekanga? Kwaye utata kaLee ongonwabanga uFrank (uBobby Ball) unantoni yokwenza konke oku? Iimpendulo zigcinwa ngokuqinileyo phantsi kwesongelo, kodwa zonke ziya kutyhilwa xa isiqendu sokuqala.
Ngaba luza kubakho olunye uthotho lokungaphumi?
Ukuthandwa kokungaphumi kuye kwanda kuphela kuthotho lwakutsha nje, kangangokuba i-BBC igunyazise ezinye ezintathu eziza kuqhuba ukuya kuthi ga ngo-2022. Abalandeli banokulindela ikrisimesi ekhethekileyo ngoDisemba, phambi uthotho lokuqala lwe-11 kunyaka olandelayo.
xa iqhubeka iza eDisney plus uk
Rupaul drag race season 13 cast
ukubulawa kwe-abc (uthotho lwe-tv).
iibraids ezisecaleni zasefrentshi
amanani amathathu intsingiselo